Wiricheya Musoro wepamusoro unowanikwa kune ese marudzi | KarmanHealthcare.com
musha / Chinyorwa Wiricheya / Wiricheya Zvishongedzo / Wiricheya Universal Headrest
Karman healthcare nyowani yekupeta wheelchair headrest yakakwana kune vese vashandisi vewiricheya avo vari kutsvaga yakawedzera nyaradzo pamutengo wehupfumi. Patent dhizaini inobvumira kupeta kana ichidonha wiricheya. Hapana maturusi anodikanwa, hapana kubviswa kunodiwa kana uchipeta nekuchengetedza wiricheya. Padded headrest ine mweya unofema pamusoro.
Iyi musoro wekudzora wheelchair headrest inopa rutsigiro pamatanho matatu ari pamusoro kudzora lateral kuruka (nzeve yakanangana nepafudzi), kutenderera (mhino kwakanangana nefudzi), uye kutenderera (chin kune chipfuva). Wiricheya yemusoro yemusoro yekudzora musoro inowanikwa kune vese vana nevakuru.
Nguva zhinji kudzikamisa musoro chinhu chinofanirwa kune avo vane zvakakomba kukuvara kwemutsipa uye nuromuscular chirwere chinoda kushandiswa kwewiricheya. Haasi ese misoro yemusoro yakasikwa yakaenzana; dzakawanda hadzina kugadzikana uye dzakaoma kugadzirisa. Pazasi iwe unodzidza mabhenefiti eKarman Wheelchair Headrest uye nei zviri nyore kwazvo kushandisa, tisingatauri kugadzikana kwazvinoita kumushandisi.
Saka akawanda misoro yemisoro yevashandisi vewiricheya obtrusive uye vanoshaya kudzikama izvo zvinoda varwere vazhinji, kunyanya nemusoro uchidonha kumberi. Iwo ayo anopa imwe mhando yekumberi musoro kudzora kazhinji haigadzikane kune iye akapfeka uye inogona kuve yakajairika. Mabhandi epamusoro anonetsa kushandisa anowanzoenda asingashandiswe na, kunyanya avo vakapinzwa basa kana vane basa rekutarisira murwere.
Wiricheya yemusoro yemusoro yekudzora musoro inouya nemusoro wakasununguka uye uri nyore kushandisa. Iyo ine inokurumidza kusunungura inosunga inoibata zvakachengeteka kune varwere musoro, uye akakosha mapedhi ekuwedzera nyaradzo. Kuchengetedza musoro zvakanaka kumusoro kunochengetedza musoro kuti usawire kumberi, chimwe chinhu chinogona kukonzera matambudziko ekufema, kunetseka kudya kana kutaura, kana kuwedzera kukuvara kwemutsipa.